Masama matsvuku mumunhu mukuru
Runako uye utano Kutarisa kwiso
Masheche matsvuku mumunhu mukuru anowanzoonekwa sechinhu chisingafadzi chinokanganisa, uye vazhinji vanotambura nechinetso ichi havatombofungi kuti zvinogonawo kuita sechiratidzo chezvirwere zvakasiyana-siyana kana zvinokonzerwa nehutano. Tsvuku tsvuku pamatama anogona kuonekwa nguva nenguva uye kuonekwa kwemaawa akawanda, kana kuti haazoperi kwemavhiki mashomanana, achisiya mitezo shure.
Nei pane masama matsvuku kune munhu mukuru?
Zvikonzero zvekuonekwa kwematama matsvuku mumunhu mukuru ndezvakawanda - kubva pane zvazvinoitika kusvika kune zvakatipoteredza kusvika kune zvakasikwa. Ngationei kazhinji kacho.
Chinhu chisina maturo pakuonekwa kwemavara ndiko kuyerera kweropa panguva yekuita basa, somuenzaniso, mitambo. Mune zvimwe zviitiko, izvi zvinogona kupfuurira kwemaawa maviri kana matatu. Kana mishonga yeropa pachitarisiko iri pedyo zvikuru nepamusoro peganda, matama matsvuku anogona "kufadza" mukadzi kunyange pamutoro muduku.
Kazhinji kacho, chinokonzera matama matsvuku mumunhu mukuru ndechokuita zvepabonde kunokonzerwa nemvere dzembudzi, michero yevirusi, mishonga nezvimwe zvinowanzovhiringidza.
Uyezve, vamwe vakadzi vanobatwa nehutema hunokonzerwa nehutoni hwekuchinja. Muchiitiko ichi, pangava nekuputsa kwekuenda kumwedzi , kuoma kuchinja.
Zvinetso neboka rekudya
Muzvirwere zvemuviri wepamuviri, ganda rehuni rinoshandura mararamiro aro kwete akanaka. Somugumisiro wezvirwere zvemuviri, chirwere chenduru kana mumatumbo, matama anofukidzwa nemaperembudzi akaputika, achigadzira kuonekwa kwemavara matsvuku.
Vanhu vane ruvara rweganda vanogona kuona kuti mushure mekugara kwenguva refu muzuva, matama anofukidzwa nemasikati machena - izvi ndizvo zvinoitika kune zvakatipoteredza. Ultraviolet inokanganisa ganda rakaoma uye rakaonda, rinoita kuti muviri uite nenzira yakafanana.
Hazvina kudiwa kubvisa zvirwere zveganda zvinokonzera kuvhiringidza uye semugumisiro mavara matsvuku pamatama - chronic rosacea chirwere uye utachiona ne-subcutaneous tick demodex ( demodekoz ). Zviratidzo zvezvirwere izvi ndezvokuti pakutanga kwezvose zvinowoneka pachiso.
Kurapa kwemashefu matsvuku mumunhu mukuru
Sezvatinoona, zvikonzero zvekuonekwa kwematama matsvuku mumunhu mukuru ndezvimwe uye zvose zvakasiyana zvachose kubva kune mumwe, naizvozvo, kurapwa kwechirwere ichi hakugoneki pasina kuongororwa uye tsvakurudzo yezvokurapa. Pamusoro pokutanga murwere anopfuura miedzo inokosha - kuongorora ropa neropa. Kubva pamigumisiro, chiremba anosarudza imwe nzira yekuongorora. Pashure pokunyatsoongorora, kurapa kwakakwana kunorayirwa.
Svinga Mask Kuburitswa Kweganda
Zvakanakisisa sei kubvisa mashizha?
Kuzorodza Face Mask
Eyebrow tattoo - nyuchi nzira
Hemorrhage muziso - kurapwa
Mazino anoyevedza anochenesa
Sunblock nokuda kwechiso
Sei kubvisa wrinkles?
Eyelash extension on teknolojia yeJapan
Hats anozivikanwa ndiyo yakanakisa uye yakaisvonaka mienzaniso
Black Raspberries Cumberland - zvinobatsira zvinhu
Gaka nema strawberries echando
Zvino zvose zvakajeka: 15 zvikonzero nei Elizabeth II asingadi Kate Middleton
Munyengetero kubva kumidzimu yakaipa
Vakapfeka zvidzitiro zvevakadzi
Zviroto zvipi zvinoitika?
Jikoni yekudya matafura
Nyeredzi pamuti weKrisimasi ane maoko ake kubva kunzwa-master master class with photo
Meryl Streep "akashandura miseve" kuna Melania Trump mushure mekunyadziswa kwekushungurudzwa kwepabonde kwe Weinstein
Steak - recipe
Tom Hiddleston haagoni kukanganwa Taylor Swift!
Kudya nemarwadzo mudumbu
Rodeo-Drive paki yemvura, St. Petersburg
Ndezvipi zviri nani kupinda mumitambo - mangwanani kana manheru?
Chii chinobatsira pamusoro pemarangi?